ကိုယ်တွေ့ / မွေးရာပါ သွေးအားနည်းခြင်း
ခံစားရသောဝေဒနာ	 မွေးရာပါ သာလာဆီးမီးယား (သွေးအားနည်းခြင်း)
ကျွန်မဖြစ်တဲ့ ရောဂါက မွေးရာပါ သာလာဆီးမီးယား မိုင်နာ (သွေးအားနည်းရောဂါ) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်စာ မစားခင်က သွေးဝမ်း ခဏခဏ သွားတယ်။ သွားဖုံးက သွေးယိုတယ်။ လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေက တစ်ခုခုနဲ့ ခိုက်မိရင် အညိုရောင် အကွက်တွေ ထတတ်ပါတယ်။
ပထမတုန်းကတော့ ကျွန်မ ဒါကို ရိုးရိုးသာမန်လို့ ထင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်မ ကျန်းမာရေး ထိန်းတဲ့ အနေနဲ့သာ လက်ဖက်ခြောက်အ၀ါနဲ့ ပန်းဝတ်မှုန်ကို သောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ အတော်အသင့် ကောင်းလာပါတယ်။
ဒီမိသားစုနဲ့အတူ ကျွန်မ သွေးလှူခဲ့ပါတယ်။ (၄)ကြိမ်မြောက် လှူတဲ့နေ့မှာလည်း ဒီလိုပဲ နည်းနည်းမူးပါတယ်။
ဆေးခန်းမှာ Drip တွေ သွင်းလိုက်၊ Saline သွင်းလိုက်၊ ဆေးချိတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မသက်သာ ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မကို Family doctor က Hb ဟီမိုကလိုဘင် စစ်နိုင်ပါတယ်။
၁၅-၁-၂၀၀၅ မှာ	နံနက် 5-6 g/dl နှင့် ညနေ5g/dl
(၁၅-၁-၂၀၀၅)နေ့ ညမှာ Family doctor က ပါရဂူထံ အပ်ပေးလို့ သွေး (၂)ပုလင်း သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ ထူးခြားမှု မရှိလို့ နောက် (၁)ပုလင်း ထပ်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ (၁၈-၁-၂၀၀၅)နေ့မှာ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့် ပေးပါတယ်။
ရောဂါအမည်ကို မေးတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ သွေး Ultra Sound ရိုက်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Diagno- sis မရနိုင်သေးရင် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ဖောက်စစ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
(၁၈-၁-၂၀၀၅)နေ့မှာပဲ လင်ဇီး(၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်းသောက်ပြီး သွေး Ultra Sound ရိုက်တဲ့အခါ သွေးထဲမှာ A1/E နဲ့ F merlee တွေ ရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီ moleculer တွေ မတူတဲ့အတွက် အချင်းချင်း တိုက်မိပြီး၊ ပျက်စီးပြိုကွဲ နေမှုကြောင့် ယခုလို သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက မွေးရာပါ ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
(၁၈-၁-၂၀၀၅)မှာ လင်ဇီး(၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်း စားနေတဲ့ အချိန်မှာ နားထဲမှာ လေတွေ အရမ်းထွက်ပြီး၊ လင်ဇီး (၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်း ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ နားလေထွက်တာတွေ ရပ်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် လင်ဇီး (၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၂)ပုလင်းနဲ့ (၁)လ စားခဲ့ပါတယ်။
(၁၈-၂-၂၀၀၅)မှာ လင်ဇီး (၁)ပုလင်း (၆၆)တောင့်၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်း (၁၅၀)တောင့်ကို တစ်နေ့တည်းနဲ့ ကုန်အောင် စားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ဒေါက်တာတင်မာထက်လိုပဲ သွေးသွင်းတဲ့အခါ သွေးထဲက ကူးစက်ရောဂါတွေ ရမှာကို ကျွန်မ အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ် လင်ဇီးနဲ့ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)တွဲကို ထပ်စားလိုက်တာပါ။
အဲဒီလို လင်ဇီး(၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်းကို စားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘဲ အရမ်းကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး နေလို့ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီနောက် လင်ဇီး(၁)ပုလင်း၊ ပန်းဝတ်မှုန် (၁)ပုလင်းကို တစ်နေ့ (၁)ကြိမ်၊ (၃)လ ဆက်စားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မမှာ သွေးဝမ်းသွားတော့ သွားဖုံးသွေးယိုတာတွေ မရှိတဲ့အပြင် သွေးလည်း မသွင်းရတော့ပါဘူး။
ယခုဆို မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ နေနိုင်ပါပြီ။
Name Ma Ei Thazin
Address Yangon, Myanmar.
Diagnosis Rheumatic Heart disease (Mitral stenosis)
About 14 years of age. I had severe pains at joints, and inflammation.
After medical check up - ASO - 260 U/ml-(Antistreptolysin titre)
I put on drips, saline at the clinic. But I was not relieved. My family doctor asked me to check haemoglobin.
Haemoglobin checked on 15.1.2005
A specialist asked me for two bottles of blood transfusion, no differences and had to take another bottle of blood. I was discharged from the hospital on 18.1.2005. Could not describe the disease, had to take electrophoresis test.
[On 18.1.2005 I took one bottle of Lingzhi (66 capsules) and one bottle of pollen (150 capsules)]. Electrophoresis test showed A1/E and F molecules in the blood. The different types of molecule crashed , destroyed each other and losing the ability of blood. This is inherited in nature. Then I took one capsule of Lingzhi and two capsules of pollen,2timesaday for one month.
I took another combination of 66 Lingzhi capsules and 150 Pollen capsules on 18.2.2005. I was afraid that I might happened to get other diseases when taking blood. That is why I took another pair(66 Lingzhi capsules and 150 Pollen capsules).At that time I felt fresh and much better.
I continued taking one capsule of Lingzhi and one capsule of pollen daily for three months. Later on I took one sachet of red tea and two capsules of pollen daily.
No more blood in the bowel, no blood leakage from the gum, no more transfusion of blood.
Now I am healthy and happy with my family.